Waxgarad Isa Soo Xilqaamay Oo Uguntaday Dhexdhexaadinta Mucaaridka iyo Muxaafidka Somaliland |
Waxgarad Isa Soo Xilqaamay Oo Uguntaday Dhexdhexaadinta Mucaaridka iyo Muxaafidka Somaliland
Hargeysa(GNN)-kadib markii uu dami waayey khilaafkii ka dhacay muddo-kordhinta dhawaan Guurtidu u samaysay Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo, isla-markaana natiijo laga gaadhi waayey wada-hadallo xukuumadda iyo mucaaridku yeesheen, ayaa waxa soo baxay Guddi is xilqaantay oo u heegan ugu jirta inay dhexdhexaadintaas galaan.
Guddidan ayaa tiradooda lagu sheegay ilaa iyo shan iyo toban qof, waxana ay isu xilqaameen sidii ay dhexdhexaadin guul leh uga gaadhi lahaayeen Khilaafka maalmahan hadheeyey Siyaasiyiinta somaliland.
Guddidan oo ka kooban qaybaha Bulshada, Ururada bulshada rayidka ah, Ganacsato, Culimaa’u-diin, Madax dhaqameed, Aqoonyahano iyo siyaasiyiin ayaa kulankoodii ugu horeeyey ku yeeshay Hargeysa, kadib markii ay maalintii labaad go’aan ka gaadhi waayeen Axsaabta siyaasadda iyo Xukuumaddu is-mari waaga u dhaxeeya ee wakhtiga qabsoomida Doorashooyinka.
Guddidan oo aan illaa hada si rasmi ah loogu dhawaaqin, hase yeeshee illaa xalay dhaqdhaqaaqooda laga dareemayey magaaladda Hargeysa, ayaa la filayaa inay kulamo gooni gooni ah la yeeshaan dhinacyada khilaafku ka dhex taagan yahay, si ay kalsooni uga helaan.
Guddidan oo la sheegay inay ku jiraan dad miisaan leh, waxay hore uga soo qayb qaateen dhismaha Qaranka Somaliland, isla markaana waxay qayb ka ahaayeen xalinta khilaafaadkii dalku soo maray haddii ay tahay mid siyaasi ah iyo mid bulshaba, waxaana lagu rajo weyn yahay inay xal ka gaadhi doonaan khilaafka taagan, maadaama Somaliland caado u lahaan jirtay inay khilaafaadkeeda ku xaliso wadahadal iyo isku-tanaasul.
Is-xilqaanka guddidan ayaa yimi kadib markii kulankii labaad ee ay yeesheen Axsaabta siyaasaddu laga gaadhi waayey Natiijo kama danbays ah oo ay dhinacyadu ku soo af-jaraan khilaafkooda, maadaama bulshada Somaliland walaac ka qabto sii socoshada khilaafka siyaasadeed, waxaanay u muuqataa in ay kaalin ka qaadan doonaan ka hor kulanka sadexaad ee ay u balameen dhinacyadu maalinta Isniinta ee bishu tahay 25/05/2015.